BitBean စျေး - အွန်လိုင်း BITB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitBean (BITB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitBean (BITB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitBean ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 594 672.00
volume_24h_usd: $1 266 690.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitBean တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitBean များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitBeanBITB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00285BitBeanBITB သို့ ယူရိုEUR€0.00242BitBeanBITB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00218BitBeanBITB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00261BitBeanBITB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0256BitBeanBITB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.018BitBeanBITB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0635BitBeanBITB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0107BitBeanBITB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0038BitBeanBITB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00397BitBeanBITB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0638BitBeanBITB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0221BitBeanBITB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0156BitBeanBITB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.213BitBeanBITB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.481BitBeanBITB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00391BitBeanBITB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00431BitBeanBITB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0886BitBeanBITB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0198BitBeanBITB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.302BitBeanBITB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.37BitBeanBITB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.1BitBeanBITB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.209BitBeanBITB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0787
BitBeanBITB သို့ BitcoinBTC0.0000002 BitBeanBITB သို့ EthereumETH0.000007 BitBeanBITB သို့ LitecoinLTC0.00005 BitBeanBITB သို့ DigitalCashDASH0.00003 BitBeanBITB သို့ MoneroXMR0.00003 BitBeanBITB သို့ NxtNXT0.215 BitBeanBITB သို့ Ethereum ClassicETC0.000405 BitBeanBITB သို့ DogecoinDOGE0.8 BitBeanBITB သို့ ZCashZEC0.00003 BitBeanBITB သို့ BitsharesBTS0.105 BitBeanBITB သို့ DigiByteDGB0.0906 BitBeanBITB သို့ RippleXRP0.00945 BitBeanBITB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0001 BitBeanBITB သို့ PeerCoinPPC0.00916 BitBeanBITB သို့ CraigsCoinCRAIG1.27 BitBeanBITB သို့ BitstakeXBS0.118 BitBeanBITB သို့ PayCoinXPY0.0485 BitBeanBITB သို့ ProsperCoinPRC0.348 BitBeanBITB သို့ YbCoinYBC0.000001 BitBeanBITB သို့ DarkKushDANK0.891 BitBeanBITB သို့ GiveCoinGIVE6.01 BitBeanBITB သို့ KoboCoinKOBO0.633 BitBeanBITB သို့ DarkTokenDT0.00262 BitBeanBITB သို့ CETUS CoinCETI8.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:35:02 +0000.